कोरोनाविरुद्ध लड्न एकजुट होऔं : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारकोरोनाविरुद्ध लड्न एकजुट होऔं
देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेका बखत सत्ताधारी दलमा राजनीतिक खिचातानी चुलिन जाँदा आमजनतामा त्यसले कत्ति पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । महामारीविरुद्ध लड्नुको सट्टा शक्ति हत्याउने, सत्ताच्यूत गर्नेजस्ता दोहोरो खेल खेलिनु आफैंमा क्षम्य छैन । देशभर लगाइएको स्वास्थ्य संकटकाललाई राजनीतिक चलखेल र तिकडम नगदीकरणको ढाल बनाउनु आफंैमा जति खेदजनक छ, त्यति नै विकृत र अराजनीतिक पनि छ । यसको नकारात्मक जनस्तरसम्म महसुस भइसकेको छ । कुनै पनि नेता चोखो, बस्त्रधारी र निस्कलंक छैनन् । नेताबीचको आपसी पूर्वाग्रह र जितहारले देशको राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने र देश रातारात चकाचौध हुने अवस्था पनि छैन । सबै नेताको व्यावहारिक परीक्षण भइसकेको छ । वर्तमान सत्तासीनलगायत कसैको कार्यकाल ‘राम राज्य’ सावित हुन सकेको छैन । गल्ती सबैका हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि यी कुनै पनि नेता र तिनले सञ्चालन गरेका सत्तामा मेल खाँदैन । किनकि, यिनीहरूले ‘ब्लन्डर’ गरेका छन्, ‘मिस्टेक’ र ‘ल्याप्सेज’ होइन । त्यसैले यी सबै क्षमादानको वर्गीकरणभित्र अटाउन सक्दैनन् ।
अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा जनताले ठूलो बलिदानी गरेका छन् । श्रम, पसिना र बलिदानको एकएक हिसाब जनतासँग छ । संसदीय व्यवस्थाको आवधिक निर्वाचन स्वीकार गरेर दलीय सरकार गठन गरेका नेता आफ्ना दलबल र भाइखलकलाई जहानियाँ र राजतन्त्रात्मक सेटिङमा किन ल्याउन अभ्यास गरिरहेका छन् ? जनताका आँखामा यी सबै अशोभनीय र अपाच्य हर्कतका रूपमा दर्ज हुन पुगेका छन् । यिनका चिन्ता र छटपटीमा न त जनताको स्वार्थ र चासोको सम्बोधन छ, न त सिंगो देशको स्वाभिमान र सम्प्रभुत्वको अभिव्यक्ति नै । त्यसैले भाइखलक, ग्याङ, गुट वा पक्षधर भन्नेहरूको जुँगाको लडाइँ जनतामा पचेको छैन । जहानियाँ शासनमा राणा आफैंमा मारामार गरे, निकाला निकाल गरे, ‘ए’ ‘बी’ ‘सी’ श्रेणीमा विभाजित भए । अन्ततः राणा शासनको अन्त्य भयो । राजा वंशको राज्य चलाउन चाहिरहे, त्यसको पनि खैरियत रहेन । आजका गणतन्त्रका नेता श्री ३ राणा, श्री ५ राजाको कार्यशैली अवलम्बन गर्न र एकले अर्कालाई परास्त गर्ने र सोहीअनुरूप राज्य प्रणाली चलाउने दिवास्वप्न देख्न थाले भने यिनको हैसियत के हुन जाला ? यी सबै फेरि गणतन्त्रवादी, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने संसद्वादी, प्रतिपक्ष र फरक मतको सम्मान गर्ने विचारवादी र जनताको सेवक भनी थाक्दैनन् पनि । तर, आश्चर्य कहाँबाट मौलाइरहेको छ शासकीय अहं र तदनुरूपको राजनीतिक तिकडम ?
देशमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ । महामारीले देश च्याप्दै लगेको छ । संक्रमण उच्चतातिर उकालो चढिरहेको छ । जनता भयभित छन् । पार्टी, सरकार र सरकारी कदमप्रति अविश्वास छैन । देशका नागरिक सीमामा आएर देशभित्र पस्न नपाई पराइको क्वारेन्टाइनमा शरण लिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली श्रमिक गएका देशले ‘तिम्रो नागरिक फिर्ता लैजाऊ’ भनिरहेका छन् । आफ्ना नागरिकको उद्धार र बचाउको अभियान खोई ? देशमा बाँडिएका भनिएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमाथि स्वास्थ्य विशेषज्ञले नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । मजदुर खाना नपाई सहर छोडेर गाउँतिर लागिरहेका छन् । कालोबजारी मौलाएको छ । महँगी अथाह चुलिएको छ । अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन छैन । यी सबैको सम्बोधनसहित सकारात्मक सोचका साथ सबै राजनीतिक पार्टी, पार्टीका नेता एक ठाउँमा आएर साझा दुस्मन कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।
सोधेको कुरा नजानेको भन्दै १० वर्षिय विद्यार्थीलाई शिक्षकले कुटेरै मारे